China mpanamboatra bibikely Piperonyl Butoxide PBO mandaitra mahomby | Senton
Piperonyl Butoxide PBO famonoana bibikely mahomby
Model No .: No. CAS: 51-03-6
Endrika ivelany: ranon-javatra
Toetrisin'ny avo sy ambany: Toetrisin'ny sela malemy
Vokatry ny herisetra: Hetsika manokana
Famokarana: 300ton / volana
Toerana niandohana: Vita sinoa
Fahaizana manome: 300ton / volana
Kaody HS: 2932999014
Butoxide piperonyl tsy misy atahorana ao an-trano Ny (PBO) dia vovo-organika ampiasaina ho singa ao fanafody famonoana bibikelyfamolavolana. Izy io dia fotsy matevina fotsy. Azo iasana io Synergist . Izany hoe, na dia tsy misy hetsika famonoana bibikely ho azy aza, dia manatsara ny tanjaky ny sasany izanyfanafody famonoana bibikely toy ny karbamate, pyrethrins, pyrethroids, ary Rotenone. Izy io dia derivative semisynthetic an'ny safrole.
Anaran'ny vokatra PBO
Fomba simika C19H30O5
Molar faobe 338.438 g / mol
hakitroky 1.05 g / cm3
Teboka mangotraka 180 ° C (356 ° F; 453 K) amin'ny 1 mmHg
Solubility: Tsy mety levona anaty rano, fa mety levona amin'ny solventsa biolojika maro, toy ny menaka mineraly sy dichlorodifluoro-methane.
fahamarinan-toerana: Ny tara-pahazavana sy ultraviolet dia miorina, mahazaka hydrolysis, tsy manimba.
habetsahan'ny poizina: Ny voalavo am-bava LD50to am-bava dia mihoatra ny 11500mg / kg Ny voalavo am-bava LD50to am-bava dia 1880mg / kg. Ny habetsahan'ny fidirana maharitra azo antoka ho an'ny lehilahy dia 42ppm.
fampiasana:Piperonyl butoxide (PBO) dia iray amin'ireo synergista miavaka indrindra hampitomboana ny fahombiazan'ny pestiside. Tsy vitan'ny hoe mampitombo ny vokatry ny famonoana bibikely mihoatra ny folo heny izy io, fa afaka manitatra ny vanim-potoana vokariny. PBO dia be mpampiasa aoFAMBOLENA, fiarovana ny fahasalaman'ny fianakaviana sy ny fitehirizana. Io no hany effets super-autoriséFamonoana bibikely ampiasaina amin'ny fidiovana ara-tsakafo (famokarana sakafo) nataon'ny UN Hygiene Organization.
Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny Mpanelanelana simika ara-pahasalamana, Fanaraha-maso ny lalitra, Fitsaboana ara-pahasalamana, Dinotefuran sy ny sisa.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy Piperonly Butoxide tsy mety simba an-trano? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny Pyrethroid rehetraSynergist famonoana bibikelyazo antoka kalitao. Izahay dia orinasa niandohan'i China azo avy amin'ny tuberonly Butoxide azo ampiasaina synergist. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Chlorempenthrin 95% TC fanaraha-maso ny bibikely
Fanaraha-maso ny bibikely famonoana bibikely Transfluthrin
Tena mandaitra amin'ny Acarids Amitraz
Ethofenprox bibikely Ethephon Agrochemical
Pyrethroids Synergists famonoana bibikely Piperonyl Bu ...